Ubuholi obusha beNFP kulesi sifunda | News24
Ubuholi obusha beNFP kulesi sifunda
ISITHOMBE: SITHUNYELWE UNobhala wesifunda uMnuz Antony Xulu, unobhala wephiko labesifazane uNkk Pinky Nzuza, uSihlalo wephiko lentsha uMnuz Shoes Manqele, uSihlalo wesifunda uMnuz Themba Mbatha, uMgcini wezimali wephiko labesifazane uNkk Thandeka Dl
KWAMUKELWE ubuholi obusha beNFP besifunda iLembe emcimbini obubanjelwe emahhovisi aleliqembu, KwaDukuza, ngoMgqibelo.
Iqembu lithule abaholi besifunda baleli le qembu kanye nabaholi bephiko labesifazane kanye nelentsha. Usihlalo wesifunda iLembe uMnuz Themba Mbatha uthe lobubuholi bakhethwa ngomhlaka 26 kuMbaso (April).
UMnuz Mbatha uthe: “Sifisa ukwazisa umphakathi ukuthi iqembu likhona kulesi sifunda, nokuthi lobuholi obukhethiwe busemthethweni,” kusho yena.
Uqhube wathi iqembu leNFP lizimisele ukunikeza abantu abanga phansi kwesifunda iLembe izinsiza nqangi ngaphandle kokuba thembisa izithembiso ezingafezeki.
Uthe: “Asilindi ukwenza izithembiso ngoba sekuza ukhetho, kodwa sicela umphakathi usinikeze amandla ngokusivotela ngonyaka ozayo ukuze bezophuma ebugqileni ababhekene nabo njengoba sibona nentsha isingene ezidakamizweni, enye idayisa ngomzimba ngenxa yokuthi ayiwutholi umsebenzi ibe inawo umatikuletsheni,” kusho uSihlalo weNFP wesifunda.Uqhube wathi njengobuholi obusha bazimisele ukusebenzisana nawo wonke amalungu e-NFP ngisho nalabo ababephikisana nokukhethwa kwabo.
Uthe ubuholi besifunda buhlonipha bonke ubuholi obuphethe IqembU njenga manje, kusukela kwizifunda, isifundazwe kanye nobuhole bukazwelonke.
Ubuholi beNFP kwisifunda ilembe bumi kanje, uSihlalo uMnuz Themba Mbatha, usekela wakhe uMnuz Thembinkosi Ntuli, unobhala Antony Xulu, uSekela kaNobhala uMnuz Kwazi Ntshangase, uMgcini zimali uMnuz Sipho Khuzwayo kanye noProject Cordinator uNkk Happiness Sokhuthu